काठमाडौंमा हैजाका बिरामी भेटिएको पुष्टि – Sulsule
सुलसुले २०७९ असार ९ गते १५:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । काठमाडौंको बागबजारका दुई दिदीबहिनीमा धारा र ट्युवबेलको पानीबाट हैजा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य विभागको रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुम्मनलाल दासका अनुसार उनीहरुले पिउने पानीको नमुना परीक्षण गर्दा इकोली र कोलीफर्म नामक जीवाणु भेटिएको छ र यो इकोली र कोलीफर्म मानिसको दिसामा रहने संक्रामक जिवाणु हो ।
‘चिकित्सकका अनुसार दिसामा पाइने जीवाणु कोलीफर्म तथा इकोली भएको पानी पिउँदा मान्छेको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । दिसामा पाइने जीवाणुले आउँ, झाडापखाला, जण्डिस लगायतका समस्या देखा पर्नुका साथै मिर्गौला तथा कलेजोमा पनि असर गर्छ ।
अहिलेसम्म ५ जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको चिकित्सकले बताएका छन् । धारा र ट्युवबेलबाट आएको पानीको नुमना परीक्षण गर्दा रिपोर्टमा घातक जीवणु कोलोफर्म र इकोली नै भेटियो,’ डा. दासले बताएका छन् । हैजा देखिएका अन्य क्षेत्रको पनि पानीको नमुना परीक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘बागबजार तथा अन्य हैजा देखिएको ठाउँका मानिसलाई अलर्ट गरिसकेको छौं । पानी उमालेर मात्रै खानु भनेका छौं,’ डा. दासले भने ।